allsanaag.com - Sool iyo Sanaag Dawlad ma arag
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3209	Days	10	Hours	35	Minutes	57	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Sool iyo Sanaag Dawlad ma arag
Written by khalid	Daawo RW Soomaaliya, oo ka sheekaynaya Riyadii u ku riyoonayey 55 Cisho uu hurday oo u xilka hayey.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa galabta Warbaahinta Shir jaraa’id ugu qabtay xafiiskiisa, isaga oo faah faahin dheer ka bixiyay waxqabadka Xukuumada ee mudada 55-ta maalmood ah ee ay jirtay.
Waxqabadka dawladu waa xaafadaha Muqdisho oo kormeer lagu tago